Amisom oo ku dhawaaqday Howlgal horleh oo laga sameeyo Soomaaliya. – Hornafrik Media Network
Amisom oo ku dhawaaqday Howlgal horleh oo laga sameeyo Soomaaliya.
Hornafrik-AMISOM ayaa ku dhawaaqday hawlgal cusub oo lagu furayo wadada dheer ee xiriirisa Magaalooyinka Muqdisho iyo Baydhabo, oo la rumeysan yahay in ay ku jiraan xoogag ka tirsan Ururka Al-shabaab.
Wasiirka Arrimaha Gudaha Xukuumada Soomaaliya oo shir dib u heshiin ah ka furay Muqdisho.
Dhalinyaro laga soo daayay xabsiyo ku yaala Libya oo Muqdisho la keenay.